Voasorok’i Emirà Arabo Mitambatra Ny Lohataona Arabo Tamin’ny Fanenjehana Tsy Ankiato Ireo Mpitsikera · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 27 Septambra 2016 6:32 GMT
Vakio amin'ny teny English, Español, Ελληνικά, Français, English
Ao ambadik'ireo trano manaka-danitra mirentirentin'i Emirà Arabo Mitambatra, no milafika ny zavamisy matroky ny fanitsakitsahana ny zon'olombelona. Saripikan'i L Constantino amin'ny alalan'ny Wikimedia (CC BY-SA 4.0)
Telo taona lasa izay ny governemantan'i Emirà Arabo Mitambatra no nitsara faobe ireo mpikatroka sy mpitsikera ny governemanta miisa 94 niantso ny isian'ny fanavaozana ao amin'ny Emirà.
Hatramin'izany fotoana izany dia tsy nisy ny fitroarana mitovy amin'ny lohataona Arabo. Tsy nisy ny fihetsiketsehana anti-governemanta mety manakaiky amin'ny fanozongozonana ny mpitondra ankehitriny. Mbola mihamatanjaka hatrany ity fanjakana manohana ara-bola ny famoretana ireo mpiaro ny zon'olombelona sy ireo mpanao gazety ity.
Fisamborana, fampanjavonana ankaterena, fampijaliana, fitsarana miangatra, famindra-toerana lavitra, ary fanesorana ny mahaolompirenena no anisan'ny paikady fanaon'i Emirà Arabo Mitambatra hampanginana ireo feo maningana sy iantohana fa tsy hisy mihitsy ny fitroarana tahaka ny lohataona arabo ao anatin'ny sisintaniny.
Amin'ity herinandro ity i Amina Abdouli, 33 taona, no kasaina hipoitra anoloan'ny Fitsarana Tampony Federaly noho ny fiampangana azy tamin'izay nataony tao amin'ny Twitter. Araka ny Amnesty International, izao no iampangana azy:
… fananganana sy famelomana kaonty Twitter roa sy famoahana vaovao manetsika fankahalana Fanjakana sy fanakorontanana ny filaminam-bahoaka; fanesoana sy fanimbana ny lazan'ny andrim-panjakana; fanelezana vaovao diso momba an'i Arabia Saodita sy manao fanamarihana manivaka momba ny manampahefana Ejipsiana iray mba hampanahirana ny fifandraisan'ny Fanjakana amin'i Arabia Saodita sy i Ejipta…
Mamadika ny famoretana ho ao anatin'ny rafitra
Miara-droa ireo fomba ireo amin'ny fanovana ny lalàna mamela fampijaliana malalaka ireo mpitsikera fanjakana ao amin'ny tontolon'ny serasera. Nanitsy ny lalànan'ny seraseran’ [mahavoaheloka bevava] ny firenena tamin'ny 2006 ny governemantan'i Emirà Arabo Mitambatra tamin'ny fampidirana tamin'ny taona 2012 fanasaziana mafimafy kokoa ireo hetsika ara-drariny amin'ny fahalalaham-pitenenana. Manasazy amin'ny fampidirana am-ponja sy ny fandoavana onitra amin'ireo rehetra mamoaka vaovao, sariitatra ary sarisary mety “hampididoza ny fiarovam-pirenena sy ny tombontsoa ambonin'ny Fanjakana na manimba ny filaminam-bahoaka” (andininy faha-28) mbamin'ny famoahana votoaty “manimba” ny “laza, ny voninahitra ary ny jenitry ny Fanjakana na ny andrim-panjakana ao aminy na ny filohany, na filoha-levitra, na ireo mpanapaka rehetra ao amin'ny Emirà, ireo printsy handova ny fanjakana, na ireo lefitry ny mpanapaka ny Emirà, ny Saina, ny fandriampahalemam-pirenena, ny fangony, ny hiram-pireneny na izay rehetra sariohatra ao aminy” andininy faha-29).
Mety hahazo sazy famonjana mandra-pahafaty araka ny andininy faha-30 amin'ny lalàna izay rehetra manao antso “hanongana, hanova ny rafi-pitondrana misy ankehitriny, na handrombaka azy na hanakorontana ny fepetra voalazan'ny Lalampanorenana na lalàna mihatra ao amin'ny firenena na manohitra ny fitsipika fototra mandrafitra ny fanorenana ny rafi-pitondram-panjakana misy ankehitriny”.
Heloka bevava mahatafiditra am-ponja sy handoavana onitra hatramin'ny 545.000 dôlara amerikana ny fampiasana VPN hanivahana amin'ny famefena napetraky ny governemanta sy ny firotsahana amin'ny raharaha tsy navelan'ny lalànan'ny seraseran'ny firenena ho azo atao.
Ny lalàna tsy voafaritra tsara dia natao hanempotra fisintahana ara-politika, hanenjika mpanao gazety, hanakana araka izay tiana habaka an'aterineto ary hikendry mpikatroka.
Ireo [politika] fametrahan-dalàna ireo dia miaraka amin'ny karazam-panitsiana ara-pitsipika mihatra amin'ny orinasa tsy miankina an-tserasera izay ahitana fandefasan-kafatra sy famoahana votoaty tokana ny servisiny, mba hanamorana ny asan'ny manampahefana hitondra any amin'ny fitsarana ny olona noho ny fihetsiketsehana an-tseraseran'izy ireo, sy hamerana ny fahafahan'ny mponina mampiasa ireo sehatra ireny any amin'ny toerana an-takonana.
Tamin'ny 2 Jolay 2013, niampanga olona 69 ny Efitra Fiarovam-Panjakana tao amin'ny Fitsarana Faratampony Federaly tao Abu Dhabi ary nanameloka azy ireo hifonja nanomboka fito ka hatramin'ny 15 taona. Tsy azo anaovana fampakarana ny raharaha ny didim-pitsarana avy amin'ny Efitra Fiarovam-Panjakana ao amin'ny lalànan'i Emirà Arabo Mitambatra.
Manazava amin'ny alalan'ny lahatsary etsy ambany ny Fanentanana Iraisampirenena ho amin'ny Fahalalahana ao Emirà Arabo Mitambatra.
Nofelahan'ny Vaomiera Iraisampirenen'ny Mpitsara sy ireo vondrona mpandala ny zon'olombelona ho “tsy mifanaraka amin'ny fenitra tsy fitongilanana ankatoavina iraisampirenena” ny fitsarana.
Fianakaviana Kendrena Manokana
Mitontona mafy dia mafy amin'ny fianakaviana [sasantsasany] ny fiantraikan'ity famoretana ity. Miaritra isan'andro amin'ny fikatrohana an-tserasera ataon'ny mpiray fianakaviana aminy ny havan'ireo mpitsikera ny governemanta.
Tsy i Amina Abdouli irery no olona ao amin'ny fianakaviana hiatriak fitsarana amin'ity herinandro ity. Hiatrika fitsarana noho ny filazana azy ho nanatevin-daharana ny vondrona mpioko mitam-piadiana Ahrar al-Sham any Syria ihany koa ny anadahiny Mosaab Abdouli, fiampangana efa notsipahiny tany aloha tany. Ny rain'i Amina sy i Mosaab, Mohammed al-ABdouli, no filohan'ny Antoko Emirati Umma voarara ary nosamborina tamin'ny taona 2005 ka nijanona tao am-ponja roa taona tsy nisy fitsarana.
Maty tany am-piadiana niaraka tamin'ny vondrona mitam-piadiana Ahrar al-Sham tany Syria izy tamin'ny 2013. Noafahana madiodio tamin'ny fiampangana ho “nanimbazimba an'i Emirà Arabo Mitambatra, ny mpitondrany, ary ny andrim-panjakana ao aminy” ny zanakavavin'izy ireo 18 taona antsoina hoe Moza al-Abdouli tamin'ny 30 May 2016, tamin'ny sioka nataony tamin'ny Marsa 2015, raha mbola 15 taona nisaona ny fahafatesan-drainy izy.
Tsy tranga maningana ny manjo ny fianakaviana al-Abdouli. Telo mirahavavy, tamin'ny herintaona, no nampanjavonin'ny manampahefana an-katerena, notazonina tany amin'ny toerana tsy fantatra nandritr any telo volana noho ny fanaovana fanentanana tao amin'ny Twitter ho fanohanana ny anadahin'izy ireo migadra, voaheloka tamin'ny raharaham-pitsarana UAE94.
Mifonja telo taona ankehitriny i Osama al-Najjar noho ny fisiahana ny fampijaliana ny rainy migadra, izay voaheloka ihany koa tamin'ny raharaha faobe UAE94. Araka ny Amnesty International, i al-Najjar dia voaheloka amin'ireo fiampangana maro ka anisan'izany ny “fandrisihana fankahalana” fanjakana, “fandrafetana sy famelomana habaka ahitana hevitra sy vaovao mpaneso sy mpanala baraka” heverina ho manohintohina ny andrim-panjakan'i Emira Arabo Mitambatra. Tsy azo nanaovana fampakaran-draharaha, ny fanamelohana azy tao amin'ny Efitra Fiarovam-Panjakana tao amin'ny Fitsarana Faratampony Federaly tamin'ny Novambra 2014.
Tsy misy ny lalàna maningana ho an'ny vahiny
Miankina tanteraka amin'ny herin'ny mpiasa vahiny ahafahana mitazona sy mitarika ny fitomboan-karenany, vahiny avokoa no mandrafitra ny 81%-n'ny mponina ao Emirà Arabo Mitambatra. Matetika no tafalatsaka ao anatin'ny fandriky ny politika sy ny lalànam-pamoretana ao amin'ny firenena ireo vondrom-piarahamonina vahiny mpiasa izay avy any Azia Atsimo-Atsinanana ny ankamaroany fa ahitana Eoropeana, Aostraliana, Amerikana ary Arabo avy any amin'ny firenenkafa.
Notazonina an-tranomaizina sivy volana tsy nisy fitsarana i Tayseer al-Najjar, Jordaniana mpanao gazety. Araka ny Human Rights Watch, nanao famotorana azy momba ny hafatra iray tamin'ny nivoaka tamin'ny Jolay 2014 izay navoakany talohan'ny nifindrany ho any Emirà Arabo Mitambatra hiasa amin'ny maha-mpanangom-baovao ara-kolontsaina azy ao amin'ny gazety iray ao an-toerana antsoina hoe Dar ny manampahefana. Tao amin'ny tsanganana i al-Najjar no nolazaina fa nitsikera ny hetsika nataon'ny Isiraeliana tao amin'ny faritra Palestiniana avy ao Gaza, sy ny fandravan'ny manampahefana Ejipsiana lozoka (tonelina) maro mampitohy an'i Gaza sy ny Saikanosin'i Sinai ao Ejipta.
Ary tsy ny mpikatroka na ny mpitsikera ny governemanta ihany no mila miahiahy amin'izay zavatra avoakany na lazainy ao amin'ny aterineto, fa na dia ny fizarana rohy fotsiny na ny mingoso ao amin'ny WhatsApp dia mety hahatonga ny mpiserasera ho voantohintohin'ny olana ara-pitsarana. Tamin'ny 28 Jolay, nosamborin'ny manampahefana tao Dubai i Scott Richards, mizaka ny zom-pirenena Britanika-Aostraliana, noho ny fizarana rohim-pikambanana mpanao asasoa manangom-bola ho an'ny mpitsoa-ponenana ao Afghanistan tao amin'ny Facebook. Ahiana higadra herintaona sy handoa onitra 100.000 dirhams Emirati (18.000 dolara amerikana) izy noho ny lalàna ao an-toerana mandrara fananfonam-bola sy fanomezana amin'ny fikambanana vahiny mpanao asasoa tsy nahazo alalana voasoratra mialoha avy amin'ny manampahefana. Tamin'ny herintaona nisy vehivavy Aostraliana iray voasazy handoa onitra sy voaroaka tao amin'ny firenena noho ny famoahana tao amin'ny Facebook mampiseho sary iray ahitana fiara iray misoavaly toerana roa natokana ho an'ny olona m anana fahasembanana teo ivelan'ny efitra nohofany.
Ireny toe-javatra ireny no nahatonga ny Fanjakana Britanika (Fanjakana Mitambatra) nanavao ny torolalana ara-pitetezantany vao haingana, mampitandrina ny olom-pireneny tsy hamoaka fitaovana mitsikera olona, orinasa na governemanta raha mbola any Emirà Arabo Mitambatra.
Mandrisika ny famoretana ny fahalalaham-pitenenana ao Emirà Arabo Mitambatra ny governemanta Britanika amin'ny fanomezana torohevitra ny mpandeha tsy hamoaka tsikera ao amin'ny media sosialy
Matetika no ireharehan'ny mpitondran'i Emirà Arabo Mitambatra ny fari-piainana ambony isitrahan'ny olompireneny sy ireo vahiny nafindra asa ao aminy. Mitana ny laharana faha-30 manerantany ny firenena tamin'ny fampilaharana fanambinan-karena tamin'ny taona 2015, izay mandahatra ireo firenena eo amin'ny fananankarena mifototra amin'ny fidiram-bola sy ny fahasoavana. Manana minisitry ny fiadanana aza ny governemanta, ary araka ny fitsapan-kevitra nivoaka tamin'ity taona 2016 ity, dia nofinidin'ny tanora amin'ny faritra arabo ho “firenena tsara indrindra” iainana sy iasana noho ny filaminana, fahatombenana ary ny zavatra azo araraotina ara-toekarena atolony i Emirà Arabo Mitambatra. Amin'izao fotoana izao, anefa, toa tsy misitraka izany fiadanana, fahasoavana ary filaminana atolotry ny Emirà izany ireo mpitsikera ny governemanta.